Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland”Baardheere waxaan u joogaa in aan Xaliyo Xiisadda ka jirta” – Kalfadhi
Madaxweyne ku xigeenka 1aad ee Maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa faah faahin ka bixiyay safar qaatay muddo kabadan Isbuuc uu ku joogo magaalada Baardheere ee Xarunta Gobolka Gedo, asaga iyo Mas’uuliyiin kale oo katirsan Baarlamaanka Maamulka Jubbaland.
Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in magaalada Baardheere ay ka taagneed muran dhinaca Maamulka ah waxna ay ka qabteen tan iyo markii uu halkaasi gaaray asaga iyo wafdigiisa todobaad ka hor. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay la kulmeen qaybaha Bulshada ee degmada Baardheere ilaa hadana ay wadaan sidii xal looga gaari lahaa dhamaan tabashooyinka Bulshada.
“Baardheere waxaan dib u habeyn ku sameynay Maamulkii ka jiray, ma jirto maamul cusub oo aan magacaawnay balse waxaan Tayeeynay maamulkii shacabka u dhisnaa oo ay soo magacaawday Jubbaland”,ayuu u sheegay Kalfadhi Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
“Markii aan imaanayey halkaan waxaa ka jiray muran dhinaca maamulka ah, waxaan kulamo wada-tashi ah la sameeyay bulshada kadibna waxaan usoo dhisnay Maamul ay dadka ku qanacsanyihiin”, ayuu yiri Maxamuu Sayid Aadan. “Waxaan ku guuleysanay in aan Baardheere ka saarno Ciidamo beeleed hubeysan oo iska soo horjeeday waxaana isugu geynay duleedka degmada” ayuu yiri asagoo hadlakiisa sii wata.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay dhaq-dhaqaaqa Al-shabaab ee Gobolka Gedo iyo Weerarada ay Al-shabaab ku soo qaadeyn degmooyinka Gobolka. Sidoo kale waxa uu ka hadlay duqeymaha Ciidamada Kenya ee Gobolka ka fuliyaan.
“Al-shabaab gobolkaan kuma xoogana, waan ka saarnay waana gobolka kaliya oo aan Al-shabaab degmo ka talin markii laga reebo Tuulooyin, waxaan ku amaanayaa Ciidamada Soomaaliya” ayuu yiri mar uu ka hadlayay Xaaladda amniga ee Gobolka. “Al-shabaab awood kuma lahan gobolkaan, waxbay soo tuur tuuraan waana ka saari doonaa tuulooyinka ay gobolka ka joogaan”, ayuu hadlakiisa sii raaciyay Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubbaland.
Duqeymaha Ciidamada Kenya ay ka fuliyaan gobolka Gedo gaar ahaan duqeymaha lala eegto Shirkadda Isgaarsiinta ee Hormuud ayuu sheegay in ay kala hadleen Dowladda Kenya iyo Ciidankeeda ku sugan Soomaaliya waxna laga qaban doono waqtiyada soo socda.
“Dowladda FS ayaa kala hadalnay, iyadana Kenya ayey kala hadashay meel fiican ayey noo mareysa Arinta duqeymaha iyo Qaraxyada lagu dhafto Xarumaha Hormuud” ayuu u sheegay Kalfadhi Madaxweyne ku xigeenka 1aad ee Jubbalnd. “Ma ogolin mana ogolaan karno in Ganacsiga umadda Soomaaliyeed la dhibaateeyo, arintaana waanu baareynaa hadana waan jooogsatay oo waan kala hadlnay kenya”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Maxamuud Sayid Aadan oo ah Madaxweyne ku xigeenka 1aad ee Jubbaland.
Madaxweyne ku xigeenka 1aad ee Jubbaland iyo Wafdigiisa ayaa lagu wadaa in dhowaan ay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, sidoo kalane ah Xarunta KMG ah ee Maamulka Jubbaland. Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Jubabland oo ka soo jeeda Gobolka Gedo ayaa qeyb ka ah Xubnaha maalmaahan ku sugan degmada Baardheere waxaana sidoo kale la filayaa in ay gaaraan degaano kale oo gobolka katirsan.
Reysal Wasaare Kheyre oo hubiyey inuu 2 sano joogay "Xafiiska Xukunka Soomaaliya"